Steel tuuboyinka awgiis Wall toogtay Machine-engeeg - Shiinaha Qingdao Saamaynta Machine
Sand Machine fiicni
Machine toogashada Core
Cusbi Sand Production Line
Clay Green Sand wax taaj oo kale Production Line
Plate Steel Shot Nadiifinta engeeg Machine
Raadi fiican tuubooyin bir tayada shot derbigii dibadda mashiinka-engeeg sameeyey Shiinaha ka mid ka mid ah ugu weyn saarayaasha Shiinaha iyo alaab - Saamaynta Machine, taas oo ah mid ka mid ah noocyada caanka ah. Kabaallaynta on qalab horumarsan iyo farsamooyinka ka xoogbadan, waxaanu kuu soo bandhigi karaa qalabka sida si sax sare, oolnimada sare, qaab lagu kalsoonaan karo iyo cimri dheer. Ku soo dhawow alaabta tayada jumlada ka our warshad xirfadeed. Tube Steel toogtay engeeg Machine: Waxaa si weyn loo loo isticmaalo r biraha ...
Raadi fiican tuubooyin bir tayada shot derbigii dibadda mashiinka-engeeg sameeyey Shiinaha ka mid ka mid ah ugu weyn saarayaasha Shiinaha iyo alaab - Saamaynta Machine, taas oo ah mid ka mid ah noocyada caanka ah. Kabaallaynta on qalab horumarsan iyo farsamooyinka ka xoogbadan, waxaanu kuu soo bandhigi karaa qalabka sida si sax sare, oolnimada sare, qaab lagu kalsoonaan karo iyo cimri dheer. Ku soo dhawow alaabta tayada jumlada ka our warshad xirfadeed.
Tube Steel toogtay engeeg Machine:
Waxaa si weyn loo loo isticmaalo ul bir ah, tuubo bir, batroolka, kiimikada, warshadaha korontada. In geeddi-socodka ah ee la xirrira, processing, gaadiidka iyo kaydinta waslad shaqada, waxaa jiri doona xabagta daahan, miridhku, slag, ciidda, saliid iyo kuwa kale dushiisa. The Machine Steel tuuboyinka Shot-engeeg soo rogi kartaa qarax shot xoog dushiisa biibiile steel ee gobolka asalka ah, si meesha looga saaro lakabka iyo miridhku ku, alxanka qiyaasta slag iyo xabagta, iyo sidaas u hesho luster macdan ah uniform, si loo gaaro roughness a dusha macquul ah, iyo in la wanaajiyo tayada daahan iyo saamaynta anti-daxalka, ilaalinta tube iyo fidinayo nolosha isticmaalka tube steel.
Beegyada uu farsamo sida soo socota:
nooca width nadiifinta ku ool ah (mm) size tubada qolka engeeg shot (mm) Nadiifinta dhererka workpiece (mm) Gudbinayeen xawaaraha (m / min) dhumucdiisuna workpiece Nadiifinta (mm) Engeeg mugga (kg / min) awood loading First (kg) tiro hawo (m3 / h) awood Total (kw)
Previous: Nooca rullaluistemadka toogtay engeeg Machine
Next: Plate Steel Shot Nadiifinta engeeg Machine
4 marawaxadaha rullaluistemadka Nooca toogtay engeeg Machine
Shot la taaban karo Machine-engeeg
Gas dhululubada toogtay engeeg Machine
H Ray toogtay Machine-engeeg
Tiiri Nooca Shot Machine-engeeg
Nooca jillaab Shot-engeeg Machine
LPG dhululubada toogtay engeeg Machine
Shot Monorail Machine-engeeg
Shot dhaqaajin karo Machine-engeeg
Paver Block toogtay engeeg Machine
Biibiile Dibadda toogtay Machine-engeeg
Biibiile Gudaha toogtay engeeg Machine
Road Shot-engeeg Machine
Rullaluistemadka Iyada oo Machine Nooca Shot-engeeg
Spinner Shot-engeeg Machine
Steel Shot Bar-engeeg Machine
Steel Shot Profile-engeeg Machine
Qaab dhismeedka Steel toogtay engeeg Machine
Wire mesh Belt toogtay Machine-engeeg
Wire mesh Conveyor toogtay Machine-engeeg
Nooca Suro Shot Catenary Sii-engeeg M ...
Shot ujawaab-engeeg Nadiifinta Machine
Hot Core Box Core toogashada Machine
Shot-engeeg Room-engeeg Machine
koonfureed ee wadada haixi ee Qingdao, gobolka Shandong